के उमेरमा छोराछोरीलाई बोल्न सुरु गर्छन्, र तिनीहरूलाई कसरी त्यसो गर्न मद्दत गर्न?
पहिले नै4महिना बच्चा फरक ध्वनि बनाउन सुरु हुन्छ। उहाँले कोठा मा एक्लै हुँदा, तपाईं मौन सुरुमा सरल ध्वनि को गायन सुन्न, र त्यसपछि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले pipsqueak आफ्नो भाषा कौशल गाडिहरु र बालक जस्तो prattle यसलाई भनिन्छ। समय त्यहाँ पहिलो शब्द हो, बच्चा विकास, बित्दै। तर कहिले काँही यो ढिलाइ भएको छ। यी बच्चाहरु को आमाबाबुले चिन्तित छन् र को प्रश्न जवाफ खोजिरहेको जसमा बच्चाहरु कुरा गर्न सुरु उमेर। बच्चा दुई वर्ष सम्म बोल्ने छैन भने, तपाईंले एक भाषण चिकित्सक एक डाक्टर, एक नसा विशेषज्ञ परामर्श, र त्यसपछि गर्नुपर्छ। सायद बोली को कमी - यो रोग वा जन्मजात असामान्यताहरु को एक लक्षण हो। तर धेरै अवस्थामा मौनतालाई - बच्चालाई को अनिच्छा को एक चिन्ह कुराकानी गर्न। उहाँले केही डराएका वा प्रियजनहरूलाई अन्तरक्रिया रुचि छैन।
छोराछोरी कसरी पुरानो शब्द बोल्न सुरु गरेका थिए?
"एम", "बी", "टी" - व्यक्तिगत ध्वनि पूर्वाभ्यास गर्नु सिक्न गर्ने प्रयास बच्चालाई को सुरुमा। उहाँले विशेष गरी "एक", "यू", "ई" को स्वरवर्णको गाउन गर्न रुचि। केही समयपछि हुनेछ बच्चाको बोली शब्दांशहरू आवाजहरू। तिनीहरू सही हुनेछ भन्ने आशा छैन। सम्भव विकल्पहरू वयस्क एक भाषण मा प्रयोग गर्दैनौं: "ँ", "UOM", "BUF", आदि यो बच्चा सच्याउन, साथै यो सही विकल्प आयातित गर्न आवश्यक छैन। सबै आफ्नो समय छ। के उमेर मा बच्चाहरु बारेमा कुरा गर्न सुरु गर्छन्? यो प्रारम्भिक प्रोत्साहन भनेर आमाबाबुले पहिलो शब्द बच्चाहरु विकास भएको छ। र थप एक वर्ष भन्दा बोल्न प्रयास नगर्ने त्यहाँ-undecideds बच्चाहरु। पहिलो र रहलपहल लागि सबैभन्दा महंगा शब्द, शब्द "आमा" हुन सम्भावना छ। बच्चालाई लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति - मेरो आमा किनभने। तर शायद बच्चा खुसी पिताजी वा बाजेबज्यै बनाउन भन्दा, भन्न हुनेछ "पिताजी" वा "बाबा"। निष्क्रिय शब्दावली बच्चा एक वर्ष र अनुसन्धान मनोवैज्ञानिक तीन महिना,4232 शब्दहरू हो। बच्चाहरु छिटो विकास गर्न लागि, उहाँले ध्यान धेरै भुक्तानी गर्न आवश्यक छ। के पाठ र अभ्यास बच्चालाई भाषा को विकास को लागि उपयोगी हुनेछ, तपाईंले सिक्न।
भाषा कौशल को विकास को लागि कक्षाहरू
छोराछोरीलाई बोल्न सुरु के उमेर मा कुनै कुरा छैन, तिनीहरूले प्रक्रिया आनन्द कति र कसरी आमाबाबुले प्रोत्साहन महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो शब्द प्रशंसा बिना बाँकी छ भने, निम्नलिखित चाँडै हुन सक्छ। आफ्नो प्रयास को क्षणमा आफ्नो बच्चा ध्यान। तिनलाई मज्जा, के यो अचम्मको र प्रतिभाशाली थियो उसलाई भन। बच्चाहरु विकास गर्न अत्यावश्यक छ! तपाईं बच्चा संग खर्च गर्न भाषा कौशल को विकास को लागि पाठ र खेल योजना, समर्पित भनेर निःशुल्क समय। यहाँ आफ्नो बच्चा बोल्न मदत कसरी केही सुझाव छन्:
, गाउन बच्चा एक भावनात्मक जडान स्थापना गर्न मुख बिगाराइ, भावना दिन। बिस्तारै शान्तपूर्वक आँखा उहाँलाई हेर्न र स्पष्ट बोल्न,। सही शब्दहरू उच्चारण, छैन वस्तुहरु को नाम विकृत गर्न।
आफ्नो स्वगत मा, बच्चा सम्पर्क र आफ्नो उत्तर को लागि एक पज छोड्नुहोस्। तपाईं प्रशंसा र स्नेह प्रतिक्रिया समर्थन बच्चा गरेको प्रयासबारे।
बाट पहिलो सुनिन्छ onomatopoeia बच्चा जनावरहरू शिक्षित। crumbs बताउन Woof "कुकुर भन्छन्"! "" सायद उहाँले आफ्नै भाषामा यो शैली दोहोर्याउन प्रयास गर्नेछ।
दन्तिये, कविता, नर्सरी राइम्स आफ्नो बच्चा पुस्तकहरू पढ्नुहोस्। तपाईं शब्द र चित्र संग कार्ड प्रक्रिया जोडिएको गर्न सकिन्छ।
विभिन्न बनावट र आकार को बच्चा खिलौने सामान दिनु। मालिश हात र खुट्टा गर्नुहोस्। ठीक मोटर कौशल विकास - यो सुधार गर्छ।
एक बच्चा कठिन कुरा गर्दैन भने, यो उसलाई सम्पर्क स्थापित गर्न आवश्यक छ। सायद बच्चालाई एक विद्वेष स्याहारसुसार।
खुशी र आनन्द संग बच्चाहरु को लागि कक्षाहरू आयोजित। एक बच्चा थकित वा बिरामी छ भने, तपाईं एक भाषण पाठ सुरु गर्नुपर्छ। अन्यथा, तपाईं लामो समय को लागि सिक्न इच्छा निरुत्साहित। हामीले यो लेख, छोराछोरीलाई बोल्न सुरु जो मा, र यो तिनीहरूलाई कसरी मदत गर्न उमेर सिक्नुभयो भन्ने आशा। नयाँ शब्दहरू तपाईं प्रसन्न आफ्नो बच्चा मदत तपाईंको प्रयासमा गरौं!
पूर्वप्राथमिक मा अभिभावक सभाहरूमा के कार्यहरू हुन्?
डेंटिइनक्स तयारी: प्रयोगको लागि निर्देशन
को निर्देशन, मूल्य संरचना: "Nurofen" (बच्चाहरु को लागि सिरप) को प्रयोग
संसारमा कान्छो आमा
ट्याब्लेटको "Merz": analogs (सस्तो), को संरचना, प्रयोगको लागि निर्देशन
ब्याज संग डेबिट कार्ड के हुन्?
विवाह Kovalchuk र Chumakov: प्रेम तारा दम्पतीको हृदयस्पर्शी कथा
एक स्वस्थ दाँत के हो? क्षय नगर्न?
कसरी सूप मा मटर खाना पकाउनु: एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न निर्णय? फोटो संग मटर सूप व्यञ्जनहरु
1961 - चिनियाँ कुंडलीको कुन पक्ष? 1961 मा जन्मेकाहरूको लक्षण
Gumbo सूप - Gourmets लागि पकवान
वेल्डिंग जोइन्टहरूमा: seams र जोइन्टहरूमा को प्रकार
अमेरिका सबैभन्दा लाभदायक के ल्याए?
घरेलू snegohodostroeniya वा नवीनता 2014 Taiga Varyag निर्णायक?